N A R G I S | ရွှေမင်းသား
Home » ကဗျာ » N A R G I S
N...........Name of the beautiful flower, Nargis.
A...........Acute with Cyclone to lovely Land ,Myanmar and Enobility people.
R...........Rushed along the Village, City and tossed the ship ,boat by the waves.
G...........Grieve and overthrow of Our ancestor farmyard, Our abode,Our parents,
Our children and Our Soul.Nargis gives Our several nation to bemoan from famine.
I...........I hate you,Nargis because of your ruthless.
S...........Salvation from starve of Our Nation, Our Children ,Our Homeless Life at
victims Cyclone Nargis in Myanmar.
လှပတဲ့ ပန်းကလေး နာမည်နဲ့ နာဂစ်ရယ်..
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည် နဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆိုင်ကလုန်းနဲ့ အတူ ပြင်းထန်စေခဲ့တယ်.
ကြီးမား ပြင်းထန်တဲ့ အင်အားတွေနဲ့ မြို့တွေ ရွာတွေကို မွှေနှောက်ခဲ့ပြီ..လှေတွေ ၊သင်္ဘောတွေကို လည်း
လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ ဖရို ဖရဲ ဖြစ်စေခဲ့ပြီ..
ငါတို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ယာတွေ ၊ ငါတို့ ရဲ့ အိမ် ၊ ငါတို့ ရဲ့ မိဘ ၊ ငါတို့ ရဲ့ သားသမီးတွေ ၊ ငါတို့ ရဲ့
၀ိညာဉ်တွေ ကို ဖျက်ဆီး ခဲ့ ပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းစေခဲ့ ပြီ....ငါတို့ နိုင်ငံ ပြည်သူတွေကို အစားအစာ
ငတ်မွတ်ခြင်းရဲ့ ဒဏ်တွေကနေ မြည်တမ်း ညည်းတွားစေခဲ့တယ် နာဂစ်ရယ်...
မင်းရဲ့ အကြင်နာ ကင်းမဲ့ မှု ၊ ရက်စက်မှုတွေ ကြောင့် ငါမင်းကို မုန်းတယ် နာဂစ် ရယ်.....
နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ရတဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု ၊
ကလေးတွေ ရဲ့ ဘ၀ ၊ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ နေရတဲ့ ဘ၀တွေကို ကယ်တင်ပေးကြ ပါ.....
ကျေးဇူးပြုပြီး......... ။ ။